फुटबल स्ट्राइकर नेइमारले बार्सिलोनाबारे गरे यस्ताे खुलासा ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
फुटबल स्ट्राइकर नेइमारले बार्सिलोनाबारे गरे यस्ताे खुलासा !
विश्वकै सबैभन्दा महंगा फुटबलर स्ट्राइकर नेइमारले आफू बार्सिलोनामा फर्कन तयार रहेको बताएका छन् । स्ट्राइकर नेइमारका पूर्व ‘टिममेट’ मार्टिन मोन्टोयाले नेइमार बार्सिलोन फर्किन चाहेकाे बताएका हुन् । स्ट्राइकर नेइमार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट २०१७ मा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन(पीएसजी) गएका थिए । नेइमार बार्सिलोनामा रहँदा लियोनल मेस्सी र लुइस स्वारेजसँगको तालमेलमा उत्कृष्ट खेल खेलेका थिए । तर राम्रो मुल्य पाएपछी फ्रान्सतिर लागे ।
पीएसजीमा पहिलो सिजन रमाउन नसकेकाले बार्सिलोना नै फर्कन चाहेका बुझिएको छ । स्ट्राइकर नेइमारले भने बार्सिलोनामा रहेका डिफेन्डर मोन्टोयाले पनि नेइमार बार्सिलोना फर्कन चाहेको बताउदै भनेका छन् की ‘उनी क्याम्प नाउ फर्कन चाहन्छन् । तर अहिले अवस्था सजिलो छैन’‘पीएसजी निकै राम्रो टिम हो । उनीहरुले अहिले सजिलै नेइमारलाई कतै पठाउँदैनन् ।
नेइमारका लागि उनीहरुले ठूलो रकम खर्चेका छन् ।’ मोन्टोयाकोे नेइमारले पीएसजीका लागि ४४ खेलमा ४० गोल र २२ असिस्ट गरेर क्षमता देखाइसकेका तर बार्सिलोनामा जस्तो रमाउन नसकेको दाबी छ । बुधबार राति च्याम्पियन्स लिगको खेलमा इन्टर मिलान र बार्सिलानाबीच हुने प्रतिस्पर्धामा मोन्टोयाले भनेका छन् ‘इकार्डी निकै राम्रा खेलाडी हुन् ।बार्सिलोनविरुद्ध उनको खेल महत्वपूर्ण हुने छ । मोन्टोयाले भने, ‘तर पनि बार्सिलोना बार्सिलोना नै हो । जुनसुकै बेला पनि बार्सिलोनाले जसलाई पनि हराउने क्षमता राख्छ । त्यहाँ निकै राम्रा खेलाडी छन् ।’